40 ပေါင်တစ်လဆုံးရှုံးဖို့အဘယ်သူမျှမတန်ရာ Method ကို!
သင်အမှန်တကယ်မြို့ရိုးအကြှနျုပျကိုခြီမောင်းသောအရာကိုသိ? ကျွန်မဆိုလို, လုံးဝနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာငါ့ကိုအခွံမာသီးကိုမောင်းနှင်? ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုလေးလေးနက်နက်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်, ထိုကုန်တိုက်, ထိုရုပ်ရှင်များ, ကမ်းခြေ ... ကိုသွားတိုင်း ...
ငါဒီရက် disgustingly အဝလွန်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ဒါကြောင့်များစွာသောလူ ...
ငါသည်ဤဟုအားဖြင့်သင်တို့ကို offending တာလျှင်, ငါတောင်းပန်ပါတယ်မရယ် ... ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုငါဖတ်နေစောင့်ရှောက်လျှင်ဖြစ်နိုင် ပို. ပင်သင်တို့ကိုပယ် piss သွားတယ်, ကတိပေးနိုင်ပါတယ် ...
သငျသညျအနညျးငယျ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစာရေး ... အခုအချိန်မှာအဝလွန်နေပါလျှင်ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူလက်တွေ့ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်တယ်တလိုက်တယ်, အဆီအရည်ပျော်လျှို့ဝှက်ချက်ဝေမျှဖို့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ ... သင်ကအနီးကပ်အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ...
သင်နှစ်သက်သောအစားအစာများကိုအရှုံးမပေးရန်မလိုဘဲသင့်ရဲ့အပိုပေါင်နှင့်ရုပ်ဆိုး flab ကွာအရည်ပျော်, ဒါမှမဟုတ်အားကစားခန်းမမှာသင့်တင်းပါးတွေဆီကနေရန်။
အဘယ်အရာကိုငါသည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေဖို့အကြောင်းရယ် Dummy အဘို့မဟုတ်ပါဘူး ...
ဒါဟာ "Big တင့်တယ်၏" ဟုပြောသင်အဝလွန်ခြင်းကနေသေလွန်သောသူတို့သည်ကျဆင်းနေ၏ခါနီးပေါ်မှာဆိုရင်သော်လည်းကျန်းမာအလွနိုင်ပါတယ်တောင်းဆိုသူကိုနိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်သော wimps နှင့်လူမှုတရားမျှတရေးစစ်သည်များအဘို့မဟုတ်ဘူး ...
ဤရွေ့ကား, တောင်ကောင်းကောင်းလာမည့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါဤတိုတောင်းသောဗီဒီယို, စောင့်ကြည့်ဖို့ Facebook နှင့်အဖြစ်မှန်တီဗီလွန်းစွဲနေသောလူများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
တဖန်သင်တို့ရိုးရိုးသားသားသင်သည်သင်၏သုံးဆ cheeseburger, ကြီးမားတဲ့ fries နှင့်ပန်းသီးပိုင်နှင့်အတူတစ်လျှောက်အစားအသောက်ကိုကာကိုလာမိန့်က "ကျန်းကျန်းမာမာ" ဖြစ်ခြင်းနေယုံကြည်သောသူအချို့ပက်ကျိမနေလျှင် ...
အဘယ်သူမျှမအမှား Make, သင်7ရက်အတွင်းမြင်နိုင်ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့, သင်တစ်ပါတ်အတွင်း Fast ရလဒ်များကိုရတာပေါ့။ သင်ကတက်ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်, သင်အလွယ်တကူတစ်လလျှင် 40 ကျော်ပေါင်ကိုဆုံးရှုံးနှင့်စွမ်းအင်, တက်ကြွခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူစိမ်းဖြင့်မနက်တိုင်းနိုးထနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းအလွန်ကျေနပ်ကျောင်းသားများအကြှနျုပျ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ ... အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျားမိန်းမတို့ ... ငါ့ကိုခေါ်ပါ "မတန်ရာ Ted ။ "
သင်ဤကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ငါသည်သင်တို့ကို BS ရန်ဒီနေရာကိုဘူး ...
ထိုနောက်မှငါသည် $ 60 ဘီလီယံဖိုးအလေးချိန်အရှုံးစက်မှုလုပ်ငန်းသောတူညီဒဏ်ဍာရီနှင့်သင်၏ဦးခေါင်းဖြည့်ဖို့ကဒီမှာဘူး, နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာမှာသူတို့ရဲ့ Co-ပူးပေါင်းကြံစည်, သငျသညျဆိခဲ့ကြသည်ကတည်းကသင်သည်ပြောနေခဲ့ကြ ...
ထိုသူတို့၏ဆေးပြားများအတွက်နှာခေါင်းမှတဆင့်ပေးဆောင်စရာမလိုဘဲသင့်ရဲ့ခါး, လေ့ကျင့်ခန်း gadgets, အစားအသောက်များတွင်စာအုပ်များ, သင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောပုံမှန်အစည်းအဝေးရှေးရှေးကပ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟု "အနိမ့်အဆီ" အစားအသောက်နှင့် "အစားအစာ" ဆိုဒါတွေနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကျုံ့။
ငါမအနတ္တအမှန်တရားအားဖြင့်သင်တို့ကိုဝင်တိုက်ဖို့အကြောင်းပေါ့ ... ဒါပေမယ့်သင်ကကိုင်တွယ်နိုင်လျှင်, သင်စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်လျှင်, ငါသည်သင်တို့အားငါသူတို့အားလူလိမ်သင့်အကြောင်းသိလိုမပါဘူးတဲ့အဆီအရည်ပျော်လှည့်ကွက်ထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ်ကတိပေး။
(ငါအစစ်အမှန် "အစီအစဉ်" အကြောင်းသင့်ပြောပြရန်အကြောင်းကိုပေါ့အဘယျသို့ကတိအလေးချိန်အရှုံးစက်မှုလုပ်ငန်းသင်ရှော့ခ်နှင့်နှောက်ယှက်ပါလိမ့်မယ်) တစ်မိနစ်အတွက်သူများလူလိမ်အပေါ် more ...
မကွာလွန်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်အဆီမဟုတ်ခဲ့သောကွောငျ့သျောလညျးငါ ... သင်မှန်ယခုအဝလွန်နေလျှင်, ငါသည်သင်တို့အဘို့ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ BIT မ, သင်သိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါကြီးမားခဲ့သည်။
ငါ McDonalds မှသွားသောအခါသူတို့ backup လုပ်ထားဘို့ဘာဂါကိုခေါ်ခဲ့ရတယ် ...
ငါသည်သင်တို့ကိုပြသသွားမယ်တလိုက်တယ်ဆီအရည်ပျော်လှည့်ကွက်အပျေါမှာလဲကျသောအခါဒါပေမဲ့အဲဒါကိုရုတ်တရက်ငါ့ကို 10 ... 20 ... 50 drop ရန်အဘို့အလွယ်ကူဖြစ်လာခဲ့သည် ... ပြီးတော့ပေါင် 100 ...
တစ်ဦးကို 100% လုံခြုံသောကျန်းမာ, လွယ်ကူပြီး All-သဘာဝအလမ်းအတွက်။
သို့သော် "ဟုအဆိုပါမုန်းလျစ်လျူရှု" နှင့်ကိုယ့်ရဲ့အရွယ်အစား၏ "မာနထောင်လွှားဖြစ်" ကိုသင်ပြောပြသူ "ကောင်းသောခံစားရတယ်" ရှေးရှေးမတူပဲ, သင်တို့ကိုငါအခြေအနေကိုအဖြစ်မှန်ပြောပြရန်ဒီနေရာကိုပေါ့မဒဏ်ဍာရီလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းငှါ ရေတိုပြေးအတွက်နည်းနည်း ...
သငျသညျငါမိနစ်၌သင်တို့ကိုပြောပြသွားတာပါတလိုက်တယ်အဆီအရည်ပျော်လှည့်ကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတာနဲ့, 15 ... 30 ကို ... ပင် 50 သို့မဟုတ် 100 ပေါင်ကျဆင်းနေလွယ်ကူပါတယ်။
ယနေ့ငါကျောင်းသားများကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေဖို့အကြောင်းကိုပေါ့ငါမသာပါးလွှာများမှာလျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျေးဇူးတင် ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်ထက်နှစ်ငယ်, ကျန်းမာရေး, စွမ်းအင်နှင့်တက်ကြွနှင့်အတူရဲရှာနေနှင့်ခံစားနေ ...
ဒီကိုသိ: ငါသည်သင်တို့ကိုပြသနိုင်ဖို့အကြောင်းကိုပေါ့အဆိုပါလှည့်ကွက်, Fast လွယ်ကူသောနှင့်သဘာလမ်းသောသူတို့သည်အပိုပေါင်ချွတ်အရည်ပျော်သွားတာဖြစ်ပါတယ် ...
ငါလုံးဝကိုသင်ပြမယ့်တာအဘယျသို့သောကြောင့်, သံသယမရှိအလုပ်လုပ်တယ် ...
ထိုသို့သင်သည်သင်၏အသက်ကိုကယ်ဖို့တရာပေါင်ဆုံးရှုံး, သို့မဟုတ်သင့်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံသို့ fit ဆယ်ပေါင်ဆုံးရှုံးဖို့လိုအပ်သလားဆိုတာကိုအရေးမပါဘူး ...
သင် "ကြီးမားသောသွေ့ခြောက်သောအရိုး" လူမျိုး၏မိသားစုထံမှလာလျှင်အရေးမပါဘူး ...
ထိုအခါငါက Fast အလုပ်လုပ်တယ်သင်ပြောပြခဲ့တာလဲ
ဒါဟာသင်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းအာမခံရလာဒ်များအရလိမ့်မယ်, အချို့လူများအတွက်ကမှန်ထဲမှာရလဒ်များကိုကြည့်ဖို့တစ်ပါတ်ထက်လျော့နည်းကြာပါသည်။
Yup ငါ7မထင်မှတ်ရက်အတွင်းမြင်နိုင်ရလဒ်များကိုရတဲ့အကြောင်းပြောနေတာပေါ့။
ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယခု မှစ.7ရက်အတွင်းစိတ်ကူး ...
အမှန်တရားသောကွောငျ့, သင်ပျင်းရိနေ, သို့မဟုတ်သင်လမ်းလွန်းကိုစားသောကြောင့်, သငျသညျအဆီမဟုတ်ပါဘူး ...
သငျသညျဖြစ်စေ, တစ်ဦးသိုင်းရွိုက်ပြဿနာရှိသည်ကြောင့်ဒါဟာဖြစ်နိုင်မယ့် ...
သငျသညျရှိသည်ကြောင့်ဒါဟာဖြစ်နိုင်မယ့် "ကြီးမားသောသွေ့ခြောက်သောအရိုး ... "
သငျသညျသင်ပေါင်ပေါ် piling အပေါ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့, ရှိသမျှသင်၏အသက်တာမှတိုက်ကျွေးခဲ့ပြီးပြီသောမုသာစကားနှင့် BS အတူတက်တိုက်ကျွေးပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းဖြစ်ကောင်းနေမကောင်းနှင့်သင့်ဝမ်းနှစ်စဉ် flabbier ရရှိသွားတဲ့အဘယ်ကြောင့်တရားမျှတရန်ကြိုးစားရန်ဆင်ခြေသုံးပြီးငြီးငွေ့ပါတယ်။
သို့သျောလညျးကို "ကောင်းသောခံစားရတယ်" ဆရာဝန်တွေနဲ့ဂုရုကလူက၎င်း၏ပိုလီယိုသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို freaking ကဲ့သို့ "အဆီ" ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည် ...
ဆိုလိုသည်မှာဤ "ကောင်းသောခံစားရတယ်" ဆရာဝန်တွေနဲ့ငါ့ကိုအကြားခြားနားချက်ရဲ့ ...
သူတို့က "သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထိခိုက်စေ" ရန်မလိုချင်ကြဘူး ...
အကြှနျုပျ၏မစ်ရှင်သင်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ငါသည်သင် dieting မုန်းပင်လျှင်, သင်၏အဆီကွယ်ပျောက်ခြင်းနှင့်ငါပြုသကဲ့သို့သလောက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစူပါလွယ်ကူသောလမ်းအတူတက်လာပါတယ် ...
ထိုသို့မကြာမီဒီနေ့သင်ဒီလှည့်ကွက်ကိုသုံးပါကဲ့သို့၎င်း, သင်တို့ပတ်လည်တင်ဆောင်နေတဲ့အပိုပေါင်နှင့်ရီဖိုင်း flab ကွယ်ပျောက်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအသီးအသီးပေါင်ဘို့သင့်ကိုအဝလွန်နေသိခဲ့ပါက, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဆီးချို, မြင့်သောလက်စထရောနှင့် 3% အားဖြင့်သွေးတိုးရောဂါအဖြစ်ရွားလှရောဂါများရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွါး?
ဒါကြောင့်သင်လည်ချောင်းနာတစ်ခုခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ 30% ပိုများပါတယ်နေဆိုလိုတယ်အကြောင်း, ပဲက 10 ပေါင်တို့ကအဝလွန်နေလျှင်။
အောက်ခြေလိုင်း, ထို fatter သင်သည်ဖြစ်ကြသည်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကြောင့်သင်တို့ကိုထိုသို့အသေခံရန်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမငါ့ကိုထက်ကဒီအကြောင်းပိုမိုသိပါတယ်, အကြှနျုပျခိုလှုံပါ၏။ သင်မြင်, သူတို့ကအမြဲ "အဘယ်သူမျှမတန်ရာ Ted ။ " ငါ့ကိုမခေါ်ခဲ့ဘူးငါ့အမေစေရန်, ငါ "Teddy Bear" လည်း "ကြီးကြီးသွေ့ခြောက်သောအရိုး" ငါ့ mom, နှင့်အဖေသင်တို့ကိုခေါ်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ခဲ့ကြသည် ... ... သူမရဲ့ထွား, cuddly ကလေးလေးပဲရှိသေးတယ် ဒါကြောင့်သူတို့ကကိုယ့်ကိုပုံမှန်အဖြစ်ငါ့ကိုမြင် ...
ဒါပေမယ့်ကျောင်းမှာကလေးတွေ, သူတို့သည်ငါအဘို့အကိုအခြားအမည်များကို ... ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမည်များခဲ့ ...
ကိုယ့်တစ်ဦးဆွဲဖွင့်ပြုပါ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုတက်ထိုင်, သို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းန်းကျင်တစ်ခုတည်းရင်ခွင်ပြေးရတာနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်၏အရှက်ကွဲခြင်းမှရှောင်ရှားရန်, အားကစားရုံလူတန်းစားစဉ်အတွင်းရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းများတွင်ပုန်းအောင်း, ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသူနာပြုသွားနှင့်အချို့ဒဏ်ရာကိုအတုသတိရ ...
ကျနော်တို့အမေရိကန်ကစ်ဘောကစားခဲ့သည့်အခါအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်း၏တဦးတည်းအဘို့ကောက်ယူဖို့စောင့်ဆိုင်းအဲဒီမှာရပ်နေသလိုခံစားရတယ်မီးလောအရှက်ကွဲခြင်းကိုဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ် ...
ဖရက်ဒီ Bavaro, ငါ့လူတန်းစားအတွက်အကောင်းဆုံးအားကစားသမားနှင့်အဆိုးဆုံးအနိုင်ကျင့်, အစဉ်မပြတ်တစျခုဖွစျသညျ "အသင်းကိုဗိုလ်မင်း ... "
လူတိုင်း "Tubby Ted" နောက်ဆုံးတဦးတည်းကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ ဘယ်ဟာကိုအဖွဲ့, အခြားကလေးတွေဟာအတူကစားရန်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားမယ်လို့ငါနှင့်အတူအတက်ကိုအဆုံးသတ် "အဆီမြည်းကို ... "
ငါလုံးဝအားကစားနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း, junk အစားအစာနှင့် sugary ဆိုဒါတွေ၌ငါ၏တို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရေနစ်ချင်ဖန်ဆင်းသော ... အသုံးမကျသလိုခံစားရတယ်။
ကျေးဇူးတင်စရာငါသည်ငါ၏မတ်ေတာရှိတဲ့ဇနီး Darlene, ငါတို့နှစ်ဦးကိုအံ့သြစရာကလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ် ... Darlene ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမှာကပ်လျက်တည်ရှိဘယ်လိုအရာလည်းသူမ၏ဘဝတလျှောက်လုံးသူမ၏အလေးချိန်နှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ ...
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးပျက်ကျမှုအစားအစာပေါ် သွား. , သို့မဟုတ် gyms ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်ရန်ကြိုးစားရန်လှုပ်ရှားမှုချီသည့်အခါကြိမ်ရှိခဲ့သည် ...
သို့သော်ဤကြိုးပမ်းမှုများကအမြဲခဏတာခဲ့ကြသည်။ Darlene နဲ့ကျွန်မဆုံးရှုံးဖို့စီမံခန့်ခွဲမဆိုပေါင်မတိုင်မီရှည်လျားသောအပေါ်ပြန် piling လာလိမ့်မယ်, ငါအရင်ကထက်ပိုလေးဖြစ်ချင်ပါတယ် ...
ငါသည်ငါ့ကလေးလေးရဲ့အဋ္ဌမမွေးနေ့များအတွက်အပန်းဖြေပန်းခြံမှငါ့မိသားစုဆောင်ခဲ့သတိရပါ။ သူလအတွင်းများအတွက်ကြိတ်စက် Coaster ကိုစီး၏အိပ်မက်ခဲ့င် ...
ငါသည်ငါ့ခါးခါးပတ်ထိကပေါက် fit မှလည်းအဆီတုန်းကဒါပေမဲ့သူတို့မကြှနျုပျ၏သားကိုတတျနိုငျသဒါငါစီးသွားနိုင်ဘူးပြောတယ်။
သူအပေါင်းတို့သည်လမ်းနေအိမ်ဟစျကျွောလေ၏ ... ငါ့ကိုယ်ပိုင်မျက်ရည်ကျောကိုင်ထားခဲ့သည်။ အရှက်ကွဲခြင်း၏မျက်ရည် ...
သင်သည်ထိုမကောင်းတဲ့ရဲ့စဉ်းစားလျှင်မူကား, ထိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ့အအထက်တန်းကျောင်းပြန်လည်ဆုံဆည်းမှာဖြစ်ပျက်နှိုင်းယှဉ်ဘာမျှခဲ့ ...
ငါမဟုတ်ဘဲအဘယ်သူမျှမမေ့ဆေးနှင့်အတူအမြစ်တူးမြောင်းခွဲစိတ်ရှိခြင်းသည်ထိုနေ့ကုန်ရပြီမယ်လို့ပေမယ် Darlene နဲ့ကျွန်မအတူတူအထက်တန်းကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာ ... ငါတို့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပုံကိုဖွင့်ခဲ့ကြ ...
ထိုမိန်းမသည်ကြှနျမအချို့အဟောင်းအတန်းဖော်ကိုတွေ့မြင်ချင်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်ငါတုံ့သူမ၏နှငျ့အတူကွှ ...
ဒါဟာဇူလိုင်လအတွင်းလောင်သော-ပူနေ့၌တစ်ဦးပြင်ပတွင်ပျော်ပွဲစားဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူတို့အခြံထွက်လူမီနီယံမြက်ခင်းကုလားထိုင်၏တဦးတည်းပေါ်မှာထိုင်, ဝက်နှင့်တူချွေးခဲ့ ...
ကြှနျတေျာ့ကိုယခင်အတန်းဖော် chatting ပတ်ပတ်လည်၌ရပ်လျက်နေစဉ်တွင်, ငါ့ဝမ်းအပေါ်အစားအသောက်ကျိန်းဝပ်၏အပြည့်အဝတစ်ပန်းကန်နဲ့ငါ့မျက်နှာကို Stuffing ...
ငါ၏အဟောင်းများကိုညှဉ်းဆဲဖရက်ဒီ Bavaro ဟာဘူဖေးစားပွဲတို့ကကျော်ရပ်နေ၏။ ငါ "အဆီမြည်းသည်" သူ၏အမေရိကန်ကစ်ဘောအသင်းပေါ်တက်အနာအခါတိုင်းကတူညီတဲ့ sneer သူသည်ငါ့ကိုပေးဖို့အသုံးပြုတာပါပဲ ... သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ sneer နှင့်ငါ့ကို eyeballing နှင့်သူ၏ဇနီးဖို့တစ်ခုခု snickering ဖမ်းမိ ... ရုတ်တရက်ကျွန်မ creaking သံကိုကြားရတဲ့အခါ ... သတ္တု Bende ၏အသံ ...
ငါ၏အကုလားထိုင်၏ခြေထောက်သွားကြားထိုးတံနဲ့တူဖဲ့, ငါငါးဆီပြင်ဟာကြီးမားတဲ့အိတ်များကဲ့သို့မြေပြင်မှ crashing သွားလေ၏။ spaghetti နှင့်အာလူးသုပ်အပြည့်အဝအကြှနျုပျ၏ပန်းကန်များနှင့်ဘီယာငါ့ဂျမ်ဘိုအရွယ်ခွက်, အပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုကျော်ယိုဖိတ် ... နေပါစေငါရုန်းကန်ဘယ်လောက်ခက်ခဲ, ငါသည်ကိုယ်တက်ကောက်လို့မရဘူး။ ကျွန်မ Beach ဝေလငါးနဲ့တူန်းကျင် flopping ခဲ့ပါတယ် ...
ကျွန်မရုတ်တရက်ကျနော်ပြန်အားကစားရုံလူတန်းစားမှမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ခဲ့ပါတယ် ... အပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုလှည့်ပတ်ရယ်သံများကြားခဲ့ကြရပါတယ် ...
Darlene ကျော်တဟုန်တည်းပြေးငါ့ကိုကျောငါ့ခြေပေါ် get ကူညီပေးခဲ့သည်သည်အထိမည်သူမျှ, ငါ့ကိုကူညီဖို့ရန်ကြွက်သားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမကကျွန်မကိုကို clean up ကကူညီပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်, ငါတို့အိမ်ပြန်သွားလေ၏။ ဒါပေမယ့်ငါ့အသကျတာ၏အဆိုးဆုံးအရှက်သာရုံစတင်နေပြီလေ!
ဖရက်ဒီ Bavaro ကသူ့ဖုန်းပေါ်မှာတပြင်လုံးကိုအဓမ္မအဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်းတင်ထားသော ... နှင့် YouTube ပေါ်မှာ posted ခဲ့ ...
ဒါဟာနေ့ချင်းညချင်း "ဗိုင်းရပ်စ်" သွား. , 11.576 လူများက Facebook ပေါ်မှာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ငါသည်ငါ့ cubicle ၌ထိုင်နေစဉ်အခါ, ငါအောက်ပါတနင်္လာနေ့နံနက်ထုတ်တွေ့ရှိရနဲ့ကျွန်မကွန်ပျူတာန်းကျင်ရပ်နေနှင့်၎င်းတို့၏ GUTS ထုတ်ရယ်မောငါ့အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏တစည်းသတိပြုမိ ...
ငါ့ကိုမှာကျော် peeking ...
ငါထသူတို့ကိုကျော် waddled နှင့်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုမွငျလြှငျ ... spaghetti နှင့်ပြည့်ဝ၏မျက်နှာနှင့်အတူမြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်အထဲက splayed ...
ငါဖယ်သူတို့ကိုတွန်းများနှင့်ရှေးဦးစွာ မှစ. ဗီဒီယိုကိုပြန်ကစား ...
ဖရက်ဒီငါ့ကိုရိုက်ကူးနေစဉ်တွင်ထိုအရပ်၌ငါသူအချို့သာ National Geographic ကဗီဒီယို narrating ခဲ့သည်တူသောပြောနေတာ ... , အပျော်ပွဲစားမှာကိုဆင်း chowing ခဲ့ ...
"ဤတွင်မြေ Whale တစ်ဘူဖေးမှာမိမိအဆီစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်မျက်နှာ stuffing, သူ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၌တည်ရှိ၏ ... "
ကြှနျတေျာ့အတိတ်၏ပြက်လုံး, ကဲ့ရဲ့အားလုံးသည်နှင့်အရှက်ကျောငါ့ကိုမှာအပြေးအလွှားရောက်လာတယ်။ ငါမယ့်အချို့နက်ရှိုင်းသော, မှောင်မိုက်တွင်းထဲသို့တွားနှင့်သေဆုံးရန်လိုခငျြနဲ့တူခံစားသတိရ ...
ဖြစ်စေကြောင်း ... ဒါမှမဟုတ်ပီဇာကိုစားကြလော့။ ဘယ်ငါလုပ်ဖို့ဆက်လက်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
ဘယ်လိုသနားစရာငါထဲကငါ့မျက်စိ bawled စဉ်အပေါငျးတို့သ toppings နှင့်အတူအပို-ကြီးမားတဲ့စက်ဝိုင်းချ scarfing အချို့ချောကျိကျိဇွန်းအတွက်တစ်ဦးတည်းထိုင်နေစဉ် ... ကြည့်ရမယ် ...
အကြှနျုပျ၏ဆရာဝန်သွေးတိုးနှင့်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်ငါ့ကိုရောဂါ, ငါ့ငါအနည်းဆုံးပေါင် 100 ဆုံးရှုံးခဲ့ရမဟုတ်လျှင်ငါသည့်အချိန်တွင်မဆိုတစ်ဦးလေဖြတ်သို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါရှိသည်ဖို့ထိုက်ခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးသတိပေးအပ်ပေးတော်မူ၏။
သူကကွဲပြားခြားနားသောဆေးဝါးများတစည်းများအတွက်ဆေးညွှန်းထွက် scribbled နှင့်ချွတ် waddling ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ ...
တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်လူတစ်ရုံလုံလောက်ပါတယ် "သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖို့ပြောလိမ့်မယ်တဲ့အခါမှာအခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့ကိုပုံသဏ္ဍာန်၌ငါ့တောင်းပန်ပါတယ်တင်းပါးရငါ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတှကျအခြိနျ! "
အဲဒီအစားငါမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ drive ကို-မှတဆင့်ထိမှန်ပြီးမြင်းသီးဖို့လုံလောက်တဲ့အစားအစာကိုတက်ခူး။ ထိုအခါငါအိမ်ပြန် သွား. ငါ့မျက်နှာကို Stuff နှင့်တီဗီများ၏ရှေ့မှောက်၌ထွက်ဇုန်ငှါ, အိပ်ရာပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချ plopped ။ အဆိုပါလေးတွေကျောင်းမှာခဲ့ကြသည်, ငါ့ဇနီးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ပြန် လာ. မဖြစ်မှီငါသည်ငြိမ်ဝပ်စွာဝက်ဖို့စုံတွဲတစ်တွဲနာရီထွက်ရှိချင်ပါတယ် ...
ငါသိတယ်လာမည့်အရာ, ငါသည်ငါ့ဇနီး, Darlene ၏အမျက်တော် ထွက်. အသံဖြင့်ငါ့အငိုက်ရာမှထခံရခြင်းကြောင့်သို့သော်လည်းငါသည် ... ငါအစားအစာမေ့မြောသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစားရကြ၏ပုံပါဘဲ။
"Ted ကသင်သည်ကိုယ်ဘာလုပ်နေကြတာလဲ" ဟုသူမကအော်ဟစ်ကြ၏။ "ငါသင့်ဆရာဝန်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုသွားလေ၏ဘယ်လိုမေးရန်မလိုအပ်ပါဘူးခန့်မှန်း - ဤဆေးဝါးများမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများနှင့်ဆီးချိုရောဂါအဘို့ဖြစ်ကြ၏!"
ငါ, ငါ့ရင်ဘတ်ပိတ်ဗလာနဲ့ Big Mac ကို boxes တွေကိုတွန်းငါ့နှုတ်ကနေချောကလက်ရေခဲမုန့်သုတ်နှင့်စိတ်ပျက်အတွက်သူမ၏ပြန်အော် ...
"ဒါဟာဒီအချက်မှာအရေးမထားဘူး။ ကျွန်မငယ်ရွယ်ပြီးအဆီ, ငါ့အဖေကဲ့သို့တူညီသောသေဆုံးသွားတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာလက်ခံစေခြင်းငှါ, ငါကျန်ကြွင်းစေပြီအချိန်ကိုပျော်မွေ့သွားတယ်။ "
ငါသည်ငါ့6နှစ်အရွယ်သမီး, Annabelle ၏စကားသံကိုကြားသောအခါမယ့် ...
"Daddy ... သင်သေဆုံးသွားပါတယ်?"
ငါကျော်ကြည့်ရှုကြ၏။ Annabelle သူမ၏နည်းနည်းဝက်ဝံရုပ်ဆုပ်ကိုင်, တံခါးဝမှာရပ်နေ၏။
နှင့်သောအခါငါသူမ၏မျက်နှာပေါ်တွင်ကြောက်တယ်ကြည့်, သူ့မျက်လုံးတွေထဲမှာမျက်ရည်ကိုမြင်လျှင် ...
အရှက်နှင့်အကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှက်ကြောက် feeling ခံရငါ့အလိုရှိသမျှနှစ်များတွင် ... ဘာမျှမသည်ငါ့ကလေးကမိန်းကလေးငါ့ထံသို့ကြောင်းပြောကြားလျှင်တူသောငါ့နှလုံးအထဲကဆုတ်။ ,
နောက်တစ်နေ့နံနက်, ငါ့ဇနီးကသူကလေးတွေကိုယူပြီးခဏသူမ၏အစ်မ၏အိမ်တော်မှာဆက်နေရန်သွားခဲ့ပါသည်ပြောတယ်။ သူမသည်ရိုးရှင်းစွာထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုမဆိုကြာကြာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်အံ့သောငှါစောင့်ကြည့်ရှိသည်ဖို့မခံနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်သူတို့သွား၏။ ငါသည်ငါ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောသူလူး, အိပ်ရာအတွက်လာမည့်နှစ်ရက်ကုန် ...
အဘယ်သို့ငါပြုအားကစားခန်းမငါ့ဝေလငါးအရွယ်အစားတင်းပါး drag and တစ်ခုလေ့ကျင်းခန်းလူတန်းစား join ဖို့ထင်ခဲ့သလဲ
ငါအရှက်၏မသေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်သူတို့ကပြန်အားကစားရုံလူတန်းစားအတွက်ကလေးတွေကဲ့သို့ငါ့ကိုမှာအားလုံးရယ်မော ... ငါ့နှလုံးအပေါ် strain တစ်ပူဖောင်းကဲ့သို့အကဖြစ်ကောင်းကွဲမယ်လို့ချင်ပါတယ် ...
ထိုအခါငါရှိတဲ့အကိုင်းနှင့်အသီးပေါ်ရှင်သန်, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖို့ကဆိုပါတယ်သမျှနောက်ဆုံးပေါ် "လအံ့ဖွယ်အစားအသောက်များတွင်" နိုင်ဘူး ...
ငါ့မိသားစုငါ့ကိုမရှိဘဲပိတ်ထားပိုကောင်းပါပြီမယ်လို့ကျွန်မပြီးသားသူအပေါငျးတို့အစားအစာကြိုးစားခဲ့ချင်ပါတယ်, သူတို့သည်ငါ့ကိုဒီတော့စိတ်ဆင်းရဲ လုပ်. , ပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ဒါကြောင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော ...
သို့သော်လည်းငါသည်လည်းအခြားအရာတစ်ခုခုသိတယ်: ငါအလုံအလောက်ခဲ့င်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ရန်လိမ်လည်ဖျားနာခဲ့သည်။
ထိုညဉ့်, ငါတယောက်တည်း ... အိပ်ရာ၌အိပ်အဖြစ် ... ရေခဲမုန့်နှင့်ရုပ်သံလိုင်း-surfing တစ်စည်ပိုင်းပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို gorging ...
အဖြေ ME တွေ့ရှိခဲ့!
ဒါဟာသူတို့အနိုင်ငံရပ်ခြားသတင်းချန်နယ်လ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကသတင်းစာဆရာတစ်ဦးရှည်လျားသောမီးခိုးရောင်မုတ်ဆိတ်နှင့်အတူဆွစ်ဇာလန်ကနေတချို့အဟောင်း, ပညာရှိ-ရှာဖွေနေဆရာဝန်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းခဲ့ပါတယ် ...
ဒါဟာဒါဟာကျွန်တော်တို့ကို "ပျင်းရိ" ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးလေရဲ့ ... သင်၏ "willpower" နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးလေရဲ့ ...
ဒါဟာသင်တို့သည်ဤမျှရှည်လျားသောများအတွက်မှားယွင်းတဲ့လမ်းမစားခဲ့ကြရတယ် ... အခုသင့်ဦးနှောက်ကိုသင်၏အစာအိမ်မှမှားယွင်းတဲ့အချက်ပြထွက်ပေးပို့ခြင်းကြောင့်သင့်ဦးနှောက် HAYWIRE သွားပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းကိုပါပဲ။
ငါသည်သင်တို့ကိုသူတွေအကြောင်းအပေါ် prattling ခဲ့ပါတယ်အားလုံးသိပ္ပံနည်းကျပစ္စည်းပစ္စယမနှမြောပါလိမ့်မယ်။ အောက်ခြေလိုင်းဤ: သင်ကားတစ်စီးင်စိတ်ကူး, သင်၏ "ဓာတ်ငွေ့ gauge" သင်တကယ်မဟုတျပါသော်လည်း ... သင် "ဗလာ" ပေါ်တွင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နေသင့်ဦးနှောက်ကိုပြောပြနေသည် ...
သငျသညျအပြည့်အဝအကြံပေးအဖွဲ့ရရှိပါသည်လျှင်ပင်တကယ်တော့, သင်၏ဦးနှောက်ကိုသင်အနိမ့်အပြေးနေတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ် - ဒါကြောင့်သင်ကအသက်ရှင်လျှက်နေဖို့ကပို junk လောင်ဖို့လိုအပျကွောငျးသငျသညျပြောပြသည်။
သငျသညျသူတို့အားမတရားသောအရအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ ... သင်ကဆိုးအစားအစာတပ်မက်အဘယျကွောငျ့င်နှင့်အခြားလူမျိုးထက် သာ. အများကြီးပိုကတပ်မက်။ ဒီကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုသည်ကားအဘယ်သို့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နှင့်သင့်ဦးနှောက်မကောင်းတဲ့အစားအစာကြောင်း, စဉ်းစားတွေးခေါ် "ဓာတ်ငွေ့။ "
သင့်ရဲ့အစာအိမ်အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်တောင်မှအခါ, သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်နောက်ထပ်ဓာတ်ငွေ့လိုအပျကွောငျးသငျသညျပြောနေတတ်၏။ ဒါကြောင့်သင်ကဓာတ်ငွေ့အဘို့ရပ်တန့်စောင့်ရှောက်, သင်၏ဦးနှောက်သင်သည်မည်သည့်အခိုက်မှာထွက်ပြေးနိုင်ထင်သောကြောင့်, ထို့နောက်နောက်ဆုံးမှာသင်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့သံဗူးကိုတက်ဖြည့်နှင့်သင့်ပင်စည်၌သူတို့ကိုသိုလှောင်ကိုစတင်ပါ။
ပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်ဆရာဝန်နီးပါးကြှနျုပျ Doritos drop လုပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုပြောကြားခဲ့့သည်က ...
သူသည်ဤအံ့သြဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသို့အများဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းသုတေသနအချို့အကြှနျုပျ၏အိမျမှသာနာရီအနည်းငယ် '' drive ကိုဖွင့်မယ့်တက္ကသိုလ်ကပေါ်သွားခဲ့ပါသည်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ပြီးတော့ငါအဆုံးမဲ့လေ့လာမှုများနှင့်သုတေသနဂျာနယ်များသို့တူးအဖြစ်ညဉ့်ဖို့အတွက်နှောင်းပိုင်းတွင်တည်းခိုခြင်း, ကျောင်းဝင်းဆေးပညာဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်အတွက်နာရီပေါင်း ...
ငါဒေါက်တာလူးဝစ် Aronne နယူးယောက်-Presbyterian ဆေးရုံ / Weill အတှကျကော်နဲလ် Medical Center မှာမှာဘက်စုံအလေးချိန်-ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာအမည်ရှိတစ်ခုအဝလွန်ခြင်းကျွမ်းကျင်သူရှာဖွေတွေ့ရှိ ...
သူသည်ထိုအဆွစ်ဇာလန်ဆရာဝန်ကဆိုပါတယ်ခဲ့ရာတက်ကျောထောက်နောက်ခံ။ နှင့်ကျော် - - ပုံမှန်အနောက်တိုင်းအစားအစာအမှန်တကယ်သင့်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲစား၏နှစ်အကြာဖြစ်သောကြောင့်အချို့လူများကမဖြစ်နိုင်တာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကိုရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းရင်း, အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အမြိုးမြိုးကြိုးစားနေပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ဘဝတစျခုလုံးပျက်စီးပေါ်တွင်သင်၏ဇီဝြဖစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသင့်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် hypothalamus အတွက်အချက်ပြလမ်းကြောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်စေရန်, အနောက်တိုင်းအစားအစာ။
ဒါနဲ့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားတူးထားရှိမည်နှင့်ယုန်ပေါက်ချပိုမိုနက်ရှိုင်း ... ငါ USA တွင်လူသိရှင်ကြားဖူးခဲ့သောအာဟာရ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်ထုတ်ဝေနေတဲ့သဲလေ့လာမှုကိုဖြတ်ပြီးလာသောအခါအကြောင်းဖွင့် ...
ငါလီဗာပူးလ်တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာပုံမှန်အနောက်တိုင်းအစားအစာရွေ့လျားမှုသို့တစ်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုသတ်မှတ်တွေ့ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းလေ့လာသင်ယူ "ဇီဝဖြစ်စဉ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ "
သင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေနှင့်သင်အမှန်တကယ်မှာအားလုံးသူတို့ကိုမလိုအပ်ပါဘူးအခါသင်, ဖက်တီး, High-carb အစားအစာများတဏှာထင် ...
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, သင့်တဲ့အစားအစာအမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသင့်ရဲ့ hypothalamus တစ်လျှောက်လုံးအချက်ပြမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်သောအာရုံကြောများ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အလေးချိန်နှင့်ဇီဝြဖစ်ထိန်းညှိရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဖျက်ဆီး ...
ယခုမှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်အစားအဆီ Burn Mode ကို၏အမြဲတမ်း "အဆီသိုလှောင်မှုကို" mode မှာပါ!
ကောင်းမွန်သောသတင်းဖြစ်ပြီး, သင်၏ "ဇီဝဖြစ်စဉ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု" reverse နှင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုဖြောင့်တင်ထားရန်အဘို့အလမ်းရှိ IS ...
အစားအဆီသငျသညျစောငျ့ရှောကျနှငျ့သငျ fatter စေသောအချက်ပြမှုများပို့, ဖြောင့်အချက်ပြမှုများကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေးပို့ခြင်း ... ဒါကြောင့်သင်တို့တဘက်၌အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်တိုင်, သင်တွေအတွက်အလုပ်လုပ်စတင်သည်ကြောင်းဒါကြောင့် ...
တကယ်တော့သင် "ဇီဝဖြစ်စဉ် Hyper-ထိရောက်မှု" ဖို့ "ဇီဝဖြစ်စဉ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု" မှသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေ့ဖို့, သုံးနိုငျတဦးတည်းလိုက်တယ်အဆီအရည်ပျော်လှည့်ကွက် .... အဲဒီမှာင်
ယနေ့ စတင်. သောကြောင့်, သငျသညျ, အ flab ကွာအရည်ပျော်သင့်ရဲ့အပိုပေါင်ချွတ်ရှို့, သင်အိပ်ပျော်နေစဉ်ပင်သင့်ရဲ့ဝမ်းကျုံ့လိမ့်မယ် ...
အဆိုပါ $ 60 ဘီလီယံဖိုးအလေးချိန်အရှုံးစက်မှုလုပ်ငန်းဤအချက်အလက် Buri ဖြစ်နေဆဲသေချာစေရန်ငွေအများကြီးချေ။
ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးပြားရောင်းသောဆီးချိုနဲ့သွေးတိုးဆေး, သငျတို့ကြောင့်အဝလွန်ဖြစ်ခြင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအမျိုးမျိုးတို့ကို - ဒါ့အပြင် Big Pharma ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည်ထံမှထောက်ပံ့ငွေနှင့်လှူဒါန်းငွေဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာလက်ခံပါ။
ဤအသုတေသီများနှင့်တက္ကသိုလ်များကြီး Pharma ဆေးဝါးလုပ်ခလစာအပေါ်နေဖို့လိုလျှင်, ကကိစ္စ္စအောက်တွင်သူတို့၏သုတေသနပြုထားရန်သူတို့၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်င် ... ဒါကြီး Pharma ဆေးဝါးသင်သည်ဆေးပြားအစာကျွေးစောင့်ရှောက်နှင့်သင့်ကုန်ကျစရိတ်မှာပေါကြွယ်ဝလာပြီနိုင်ပါတယ်။
ငါကတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်၏မြေအောက်ခန်းထဲမှာဘယ်တော့မှ-မတိုင်မီ-ထင်ရှားလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်ဦးရတနာသိုတွေ့ရှိခဲ့ ... ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူသိရှင်ကြားခဲ့တာဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်, ယခုသငျသညျအဘယျကွောငျ့ငါသိ၏။
အလေးချိန်ကျဆင်းနေနှင့်ငါ့အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါနောက်ပြန်ဆုတ်။
အဆိုပါပေါင်ကွယ်ပျောက်စပြုလာသည်, ငါ့စွမ်းအင်နှင့်အကောင်းမြင်ပြန်ရောက်သကဲ့သို့ငါနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင် ...
သင်အခုအဝလွန်နေ, ဒါမှမဟုတ်မှားသောနေရာများအတွက်အချို့ခေါင်းမာအပိုအဆီတင်ဆောင်လာသောလျှင်, သင့်ရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးလျက်, မထိုက်မတန်ကျန်းမာပျော်ရွှင်တည်းခိုမှကြွလာသောအခါတောင်မှပိုဆိုး, ဒါခေါ်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှထွက်ရှိသည် "အကြံဉာဏ်ကို" ၏အများကြီးဘက်မှာကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ငါမနက်တိုင်းမှန်၌ငါ့ရလဒ်များကိုမြင်လျှင်, ငါပင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုဖော်ပြရန်စတင်မနိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်သကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားငါ၏ဖြစ်သကဲ့သို့ငါ့မိသားစု, ယခုငါ့ကိုအဖြစ်ဂုဏ်ယူခဲ့ သိ. ခံစားရတယ်။
ငါသည်ငါ့ဇနီး Darlene ငါ၏အအဆီအရည်ပျော်လျှို့ဝှက်ချက်ပြသဖြင့်, သူသည်တစ်လအတွက် 27 ပေါင်ဆုံးရှုံးဖို့အသုံးပြု ...
ငါ ... ငါ့ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူက shared နှင့်သူတို့လည်းပေါင်းစပ် 120 ကျော်ပေါင်ကွာအရည်ကျို။
ငါသည်ငါ့ Facebook စာမျက်နှာအပေါ်မှာငါ့ကိုယ်အလေးချိန်ခရီး၏ဓာတ်ပုံများကို posted, ထိုသို့ဗိုင်းရပ်စ်သွားသောအခါ, ငါရုတ်တရက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျပန်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကျွန်ုပ်ကို "မိတ်ဆွေတစ်တောင်းဆိုမှုများ" ပေးပို့ခြင်းနှင့်ငါ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအဘို့အကြှနျုပျကိုတောငျးဆိုခဲ့ ...
ဒါနဲ့သူတို့နှင့်အတူအနည်းငယ်အကြံပေးချက်များ shared နှင့်မကြာမီသူတို့မရောက်မီ-and ပြီးနောက်ငါ့ကိုပေးပို့ခြင်းရုပ်ပုံများနှင့်သူတို့၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမျှဝေခဲ့ကြသည် ...
ငါတဦးတည်းအရာမတဦးတည်းရိုးရှင်းသော, step-by-ခြေလှမ်းစနစ်အစသုတေသနနှင့်ဒေတာများအပေါငျးတို့သညျငါ၏လအတွင်း compile နှင့်တစ်ဦးတည်းသာအရာဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဤသူကားအ ...
သင့်ရဲ့အဆီဝေးအရည်ပျော်နှငျ့သငျခငျြသကဲ့သို့အများအပြားပေါင်ချွတ်ရှို့, Fast ။
တစ်ခုမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်, Sarasota, Florida ကနေဂျိန်းအက်စ်, ဒီသတင်းစကားနှင့်အတူပြီးနောက်မတိုင်မီ-and ငါ့အကို Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရုပ်ပုံသူမ၏ posted:
ကြှနျတေျာ့ဇနီး Darlene ငါ့ကိုတောင်းဆိုရယ်စရာစတင်သောအခါ "ဟုမစ္စတာင် no-အနတ္တ, "ငါသေချာငါ့ကိုခေါ်သောလူမျိုးကို beats ... သင်ကဟေးငါစိတ်ထဲမပြုခဲ့ ... ငါ့အအမည်ပြောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟုပြောနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်း" Teddy Bear "သို့မဟုတ်" Tubby Ted, "သင်မပြောပါ့မလား
ငါအများပြည်သူငါ၏အဘယ်သူမျှမကဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကိုမရရှိနိုင်အောင်စတင်ခဲ့ပြီးတပြိုင်နက်, စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်မယုံနိုင်စရာဓါတ်ပုံတွေထဲမှာလောင်းထားရှိမည် ...
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရိုးရှင်းစွာအလေးခြိနျဆုံးရှုံးဖို့ဒီရိုးသား, "အဘယ်သူမျှမအနတ္တ" ချဉ်းကပ်နည်းယူသဖြင့်အံ့သြဖွယ်ရလာဒ်များရရှိရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
နောက်ကျောကိုငါ့ဇာတ်လမ်းမှာကြည့်ကပဲတစ်နှစ်အကြာဆိုပါစို့ရန်ခက်ခဲမယ့်, ငါထွက်ခွာကျွန်တော့်ဇနီး၏ခါနီးတွင်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့တောင်းပန်ပါတယ် feeling ကိုငါ့အိပ်ရာမှာညပ်မိခဲ့ပါတယ် ...
ယခုသင်ငါ့ကိုကြည့်ရှုလျှင်, ငါကောင်းစွာ 100 ကျော်ပေါင်အဝလွန်ခဲ့ယုံကြည်ဖို့တောင်ခက်ခဲပါတယ်။
ငါ၏အကြီးတွေ, ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဝမ်းနှင့်အတူ, ငါ့အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်မြင့်မားသောသွေးဖိအားကိုယခုခြောက်လကျော်လကြာသွားပြီပြီလို့ပဲ။
ငါဒီအဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကိုခေါ် ...
ထိုသို့ရန် "ဇီဝဖြစ်စဉ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု" မှသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းရွှေ့ရသည်ကွောငျးတစျခုလိုက်တယ်လှည့်ကွက်ထုတ်ဖော်ပြသကြောင်းထွက်ရှိတစ်ခုတည်းသောသည့်စနစ်ရဲ့ "ဇီဝဖြစ်စဉ် Hyper-ထိရောက်မှု။ "
သင်ဤခက်ခဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်လျှင်, နောက်တဖန်ထင် ...
ကျွန်မနာရီနေ့အဘို့အထဲကအလုပ်မလုပ်ဖို့အချိန်သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားရှိသည်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကျဉ်းကျုတ်မှတခြားဘာမှလုပ်မထားဘူးသူမည်သူမဆိုအတွက်ဒီစနစ်ကပြီးပြည့်စုံသောစေ, ငါ၏လမ်းထဲကထွက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ငါရှာနေတာအဖြစ်ငါလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကြီးမားသောပန်ကာမပါပဲအဖြစ်ပိန်နှင့်မထိုက်မတန်, ငါ့ယုံကြည်ပါတယ်။ နေဆဲသငျသညျအမြင့်ဆုံးရလဒ်များကိုရယူနေစဉ်ဒီတော့ငါသေချာကျနော်တို့ရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးကိုစောင့်ရှောက်ပါစေပါမယ်။
သင့်ကိုနောက်အထက်တန်းကျောင်းပြန်လည်ဆုံဆည်းမှာလှည့်ဦးခေါင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သင်၏နောက်မိသားစု get-အတူတူ ... သူတို့ကိုသင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဘို့သင့်ကိုမေးရှိခြင်း ...
သငျသညျအလေးခြိနျဆုံးရှုံးဖို့, ငါ့ "ပျင်းရိလမ်း" စမ်းတစ်ချိန်ကထို ... ကညြစာရေးတံအသစ်ရဲ့အသက်တာကိုဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုအံ့သြဖွယ်ပဲစတင်ပါပဲ။
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အစာရှောင်ပယ်မီးရှူးတိုင်မှဆီဥကိုသိရန်လိုအပ်သမျှသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ, စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာချက်ချင်းရှုမြင်နိုင်သည့်, ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်သင်တန်းအတွင်း၌ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအားဖြင့်, ဒီအဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကို 16.300 ကျော်ကတခြားယောက်ျားမိန်းမတို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ထိုသူတို့၏ခင်ပွန်း၏, မယားနှငျ့မိသားစုဝင်များတို့သည်ဖြစ်ကြသကဲ့သို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
မဟုတ်ငါ့ကို, ဒါမှမဟုတ်အခြားမည်သူမဆို - - သင်ကကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအသင်တို့အဘို့အလုံအလောကျကောငျးမှအထောက်အထားမပါလျှင်ဘယ်သူမှကွောငျ့, ထို့နောက်ပြန် Doritos သင့်ရဲ့အိတ်နှင့်သင့်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့တီဗီရှိုးကိုသွား
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးသိ, သငျသညျအကြှနျုပျ၏လာမယ့်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ချင်တယ်။ သင်ဤ Drop-သေပြီလွယ်ကူသော system ထဲကနေမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရလဒ်များကိုကြုံတွေ့င့်သောသူအပေါင်းတို့, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ, အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာ join ချင်တယ်။
စကားမစပ်အဲဒီက "beta ကို" version ကိုကြိုးစားခဲ့သူတွေကိုခဲ့ကြသည် ...
သငျသညျကကိုယ်အလေးချိန်မတစ်ဦးပြည့်စုံပက်ကျိဖြစ်ဖို့ရှိသည်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် ထိုအချိန်မှစ. ဤလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်, ကပင်ပိုမိုလွယ်ကူအဆီကိုမီးမရှို့စေဖို့ပိုအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်နှင့်အတူအဆင့်မြှင့်တိုးတက်လျက်ရှိသည်။
ဒါဟာဖော်ရွေပေါင်း 100% "ပျင်းရိသူတစ်ဦး" ရဲ့ ...
ဒီလက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကိုင်နှင့်ခြေလှမ်းများအားဖြင့်သင်တို့လျှောက်လှမ်းပါကအပေါ်သင်၏လက်ရတဲ့၏အချိန်လေးအတွင်းမှာ, သင်သည်သင်၏အလေးချိန်ကိစ္စများ reverse နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နှင့်သင်ပါတယ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရတဲ့စတင်မည်သောတဦးတည်းစနစ်ကြောင့်, အမြဲအိပ်မက်မက် ...
ဒါဟာတကယ်ရေခဲတောင်၏ရုံအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တန်န့်အသတ်မှ, ငါသာသင်အပြည့်အဝစနစ်ကအတွင်းပိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်အရာ၏အကြောင်းကို 10% ပြောပြနိုင် ...
ဘယ်ပြန်လည်သုံးသပ် edited အလွန်လေးစားဖွယ်အမေရိကန် MD အသုံးပြုပုံနှင့်အခြားကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကျန်းမာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအကွာအဝေးဆီက input တို့ပါဝင်သည်ခဲ့သည်။
သင်တို့သည်လည်းဤထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သော်လည်း, သင်တို့သည်နောက် guinea ဝက်သိရသငျ့သညျ။ ငါတောင်မှဒီတင်ပြချက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောခင်မှာကျနော်တို့ပြီးသားအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထက်ပို 16.300 ယောက်ျားမိန်းမတို့ကုသချင်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်တစ်ဦးသည်ယောက်ျားမိန်းမ, နှင့်မျှမတို့ကိစ္စကသင်၏အသက်အရွယ်ရောက်နေသည်ဖြစ်စေ, သင်ဖုံးလွှမ်းတယ်ရဲ့ ...
ဤရွေ့ကား, များအတွက်အကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်း ...
ဒီအဘယ်သူမျှမကဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကိုအဓိကအဆင့်မှာသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာယာယီပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး "တီးဝိုင်းအကူအညီ ... "
အဘယ်သူမျှမ ifs, buts သို့မဟုတ်ဒီတစ်ခါလည်း။
မကြာခင်မှာပဲ, သင်နောက်ဆုံးတွင်အရှက်, အအရှက်ကွဲခြင်းကိုသင်တို့ပတ်လည် hauling နေသမျှသောအပိုအလေးချိန်နှင့်အတူလာသောစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်နိမ့် Self-လေးစားမှုကနေအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ် ...
သင်ကြည့်ရှုဘယ်လောက်ကောင်းသတိပွုမိသူတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြာခင်မှာပဲသငျသညျ ... ဂုဏ်ယူအရပ်ရှည်ရှည်နှင့်ယုံကြည်မှုရပ်နိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ် ...
အခြားလူများယခုကြည်ညိုလေးစားမှုကိုပင်ငြူစူသောစိတ်နှင့်သင်တို့ကိုကြည့်, သူတို့သည်သင်၏အအံ့သြဖွယ်အဆီအရည်ပျော်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိလိုနေကြသည် ...
ထိုအသင်သည်သင်၏အလေးချိန်သငျသညျကနျြးမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူခံစားနေရပြီးကြောင့်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများနှင့်ဆီးချိုရောဂါဆေးဝါးများအပေါ်ချိတ်ဆက် Big Pharma ဆေးဝါးတစ်ကျွန်အဖြစ်တက်လေဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် ...
အဝလွန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်မိသားစုများခွဲမခွာနိုင်သည့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်စိတ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများဦးဆောင်အကြောင်းတရားများ ... တစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျယခုသင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကိုထိန်းချုပ်၌နေသောနားလည် ... တဖန်သင်တို့အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်ဦးခံစားချက်တွေ့ကြုံခံစားပါတော့မည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤသည်နေ့ရက်ကနေ, သင့်အသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်ဆုံးဖြတ်သော်လည်းသင်လိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှမရှိလိမ့်မည်, ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစားအရှက်, စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်သင်အခုခံစားနေပင်ပန်း feeling နဲ့ချဝတ်ဆင်၏အလုံးစုံအဓိပ္ပာယ်လော
သင်ကဤထက်ပိုကောင်းထိုက်ကိုသိ ... ဒါသင့်ရဲ့ချစ်ရသူလုပ်ပါ။ သူတို့ကသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမှာသငျသညျချင်တယ်။ မပေးသငျသညျအခုအချိန်မှာဘယ်လောက်။
အခြားအ weight- ဆက်စပ်နတ်ဆိုးများသင်၏အသက်တာတိုတောင်းဖြတ်ခင်နဲ့အခုသင်ပြုမူနှင့်ဤ All-ကသဘာဝအဆီအရည်ပျော် System ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြဘူးလျှင်, သင်တို့အာမခံနိုင်ပါကအချိန်တစ်ခုသာကိစ္စရဲ့ ...
ဤအနတ်ဆိုးများသင့်မိသားစုအပေါ်မှာသက်ရောက်စီရင်မည်ကြီးမားသောငွေရေးကြေးရေး strain ဖော်ပြခြင်းမ ...
သင်ရုံသင်အရေးယူမထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်ဆပ်ဖို့မကြာမီလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ယင်းအလွန်ကြီးမားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါတယ်သေချာစေရန်, ပတ်ပတ်လည်ကိုတင်သောအပိုငွေသား၏လိပ်ခေါင်းရှိသလား
ဘယ်လောက်ထက်ပိုသောအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံသင် core ကိုပြဿနာကိုပျောက်ကင်းစေနှင့်သင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအပေါငျးတို့သ reverse နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်, ကျန်းမာရေးနှင့်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ပေးနိုင်အခါ, အဝလွန်ဖြစ်ခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသအပေါ်ဖြုန်းတီးချင်ကြဘူး - တစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်တကွနည်း
သင်ဤဖြေရှင်းရမထားဘူးဆိုရင်, တစ်နေရာရာမှာမျဉ်းချ ... ဒါဟာအဖြစ်မကြာမီမနက်ဖြန်အဖြစ်, ဒါမှမဟုတ် 10 နှစ် '' အချိန်အတွက် ... သင်ပြွန်သင်သည်ထဲကကပ်နှင့်အတူတစ်ဦးဆေးရုံအိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းပါလိမ့်မယ်နိုင်နှင့်နှလုံးစက်နှင့်ချိတ်ဆက် သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်မှတက်, သင်မျက်နှာကျက်မှာ helplessly ကြည့်နေစဉ် ...
သင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေသင်တို့အပေါ်မှာရပ်နေနှင့်အတူ, ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်ဖျားနာစိုးရိမ် ...
နက်ရှိုင်းသောဆင်းအတွင်းပိုင်း, သင်ကဝန်ခံသို့မဟုတ်မလိုသောရှိမရှိ, သငျသညျအဆီဖြစ်ခြင်းသိသိသာသာတချို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောရောဂါသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွါးကိုသိ ချငျသညျသပိတ်မှောက် ...
ငါသည်ငါ၏အမှု, အများဆုံးငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ငါသွားကြောင်းပြီးနောက်ငါ့ကိုအစားထိုး, တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေသွားကြဖို့ရှိခြင်းခံခဲ့ရငါ့ကိုကမောက်ကမသောအတှေးတစျခုတှငျသင်သိရ ...
နှင့်ငါ့ကလေးတွေကိုတခြားဖခင်, ဒါမှမဟုတ်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမဖခင်နှင့်အတူတက်ကြီးထွားလာ ...
သင်သိတဲ့အခါသင်ဒီကြိုးစားခဲ့ဖူးလျှင်အထူးသဖြင့်, သင်သည်ဤအမှုရှိသမျှတို့ကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့ ခြင်းမရှိပါဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကို ယနေ့?
ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရပါစေ, အဆီဖြစ်ခြင်းကိုသင်လျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်သေးငယ်တဲ့ပြဿနာမရှိ, ကိုယ့်ကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ် "ပျောက်တတ်၏။ "
အဆိုပါပိုကြီးသင့်ရဲ့ခါးလိုင်း, သင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်နေကိုပိုမိုပြဿနာများ ...
သငျသညျအရေးယူမထားဘူးဆိုရင်, ကအလွန်ကောင်းစွာသင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး, သင့်ရဲ့လိင်ဘဝ, သင့်ဘဏ္ဍာရေးအနာဂတ်, သင့်အိမ်ထောင်ရေး, သင့်မိသားစု, သင်ချစ်ရတဲ့ကိုင်အရာရာကုန်ကျနိုင် ...
သငျသညျအရေးယူတာမပါဝင်ပတ်သက်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကြည့်သောအခါသူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအ ... လုံးဝအကြီးအကျယ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
... ငါသည်သင်တို့၏ဖိနပ်ခဲ့ပြီးပြီ, ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ ... ငါအဆီခဲ့တာ, ငါသည်သင်ခံစားရစေသည်ကိုအတိအကျသိ သင်၏ Self-လေးစားမှု့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေ ... ဒါဟာသင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှု wrecks ...
သင်မသက်မသာခံစားမိ, သင်လိုချင်တဲ့ဘဝအသကျရှငျကိုရပ်တန့်စေအခြေအနေများရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့သင့်ရဲ့အကျဉ်းထောင်ဖြစ်လာသည်ပိုကြီးသငျသညျအရ ... သင့်ရဲ့အကျဉ်းထောင်ဖြစ်လာသည်။ ငါသည်ခဲယဉ်းလမ်းသင်ယူ ... ရှိခဲ့သည် ... ငါနီးပါးအဆုံးစွန်သောစျေးနှုန်းပေးချေ။
သင့်အနေဖြင့် "အဝလွန်ခြင်းနတ်ဆိုး," နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါသင်ကြောင်းကံကြမ္မာခံရဘူးသေချာစေရန်ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ရတယ်တိုက်ခိုက်နေနဲ့ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကိုသိ ...
ထိုအခါငါ့လက္ခဏာတွေ "ပြုမူဆက်ဆံ" ရန်ကြိုးစားနေမှသာနာကျင်မှုရှည်ကိုယ်တွေ့ဘယ်လိုသိကြ၏။
တန်ဖိုးအားအဘယျသို့သောမယ်လို့ သင်က , အမြဲတမ်းအတွက်သင့်ရဲ့အဆီဝေးအရည်ပျော်သင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှု restore, သင်အဖြစ်နည်းနည်း7အဖြစ်နေ့ရက်ကာလ၌အမှန်တကယ်ရလဒ်တွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့သင်တန်းအပေါ်နေရာ?
ပဲသငျသညျပြီးသား "အံ့ဖွယ်ဆေးပြား," fad အစားအစာ, လေ့ကျင့်ခန်း gadgets, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာ, အားကစားရုံအသင်းဝင်, သို့မဟုတ်သင်သူတို့ကတိပေးရလဒ်မပေးပါဘူးကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်အခြားနည်းလမ်းတွေအပေါ်ဖြုန်းတီးကြပေမည်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံစဉ်းစားပါ။
ငါ၏အရိုးရှင်းသောသုံးပြီးပြီးနောက် အဘယ်သူမျှမ-ဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကို ငါကျောင်းသားများကိုသူတို့ပဲဒီအောင်မြင်မှုများသတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ထက်ပိုမို $ 1,997 ပေးဆောင်ကြလိမ့်မယ်ငါ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ် ...
သို့သော်သတငျးကောငျးငါသာသည်သူ၏အိတ်ကပ်တန်းစီဂရုစိုကျသူအချို့လောဘကြီး Pharma ဆေးဝါးစီအီးအိုဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့နှင့်တူရုံပျမ်းမျှလူတစ်ဦးပေါ့။ ငါသည်သင်တို့ကိုတဆင့်သွားနေတာဆိုတာသိ ...
တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ All-သဘာဝကျကျအဆီကိုမီးမရှို့ရန်ဒီ "ပျင်းရိလမ်း" ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုခဲ့သောလျှို့ဝှက်ချက်အပေါ်သို့ထိ မိ. လဲရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါနဲ့ $ 1,997 ပေးဆောင်ရန်သင့်အားမေးရန်မသွားဘူး။
ဒါဟာ $ 997 လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူကတောင် $ 197 လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင့်ရဲ့သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယနေ့တစ်ကြိမ်သာ, အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ် အမ်းသိုက် သင်ကဗီဒီယိုကိုအောက်တွင်ကြည့်ရှုပမာဏသည်။ ငါအခမဲ့အဘို့ဤအထဲကပေးခြင်းခံရဖို့ကိုချစ်ပေမယ့်ငါ overhead နဲ့ကျွန်မအွန်လိုင်းဤ website ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ပေးဆောင်ဖို့လိုတယ်ကုန်ကျစရိတ်များနားလည်ကျေးဇူးပြုပြီးချင်ပါတယ် ...
ထောင်နှင့်ချီပိုပြီးယောက်ျားမိန်းမတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီ site ရှာဖွေတွေ့ရှိသကဲ့သို့ငါ၏က်ဘ်ဆိုက်ကုန်ကျစရိတ်, လစဉ်လတိုင်းပိုကြီးကြီးထွားလာနေကြတယ် ... ငါသည်လည်း, ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်သငျသညျ 24 နာရီတစ်ရက်ကိုကူညီရရှိနိုင်ပါလိမ့်ကြှနျတျောတို့၏ဖော်ရွေဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်သည်ငါ့အဘယ်သူမျှမ-ဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော်စနစ်ကနေရရလဒ်များနှင့်အတူလှသောစိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ပါဘူးသောမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်အတွက်, သင့်တဦးတည်းအချိန်သိုက်ကြောင့် 100% အမ်း။
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဖော်ရွေဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကအီးမေးလ်ပို့နှင့်နိုင်ပါတယ် တိုင်းတစ်ပြားမှပြန်ရ လာမယ့်ရက်ပေါင်း 60 ကျော်သည့်အချိန်တွင်မဆို။
ငါသည်သင်တို့ကိုစနစ်ရယူကြောင်းအကြံပြု, လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပွတ်ဆွဲ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့အမ်းသိုက်ပြန်ချင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။ သငျသညျအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အပြည့်အဝရက်ပေါင်း 60 ရရှိပါသည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, သင်တို့ကိုငါအနေဖြင့်အားလုံးအန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပြီးပြီနှင့်အခုဒါ ... ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပခုံးပေါ်မှာထားပြီးလျှင်, ဒီပါမပေးဘို့အဘယ်သူမျှမဆင်ခြေဆင်လက်လုံးဝရှိပါတယ်။
သင်သိုက်ကျောမဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ဖြစ်ပါသည်ချင်ဆုံးဖြတ်ရုံကိစ္စတွင်သတိရပါ။ သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များဧရိယာရိုက်ထည့်ပါနှင့်စနစ် access ကိုရတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်မြင်, ငါတကယ်သင်ဤ page.I'm သငျသညျအကြိုးရလဒျရတဲ့ထံအပ်နှံသူကောင်လေးပဲတဲ့ "အဘယ်သူမျှမအနတ္တ" type ကိုဖတ်နေစတင်ခဲ့သည့်အခါငါသည်သင်တို့ထင်ကြပေမည်သည့်လူရှုပ်ဘူး။
သို့သော်လည်းငါသည်ဤမျှဝေး, လူအနည်းငယ်ကသာသူတို့ရဲ့သိုက်ကျောအဘို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်လိုသူအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျားမိန်းမတို့ကနေနေ့တိုင်းအီးမေးလ်များကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လောလောဆယ်ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, တစ်ရက် 383 ကျော်လူများ၏ဘဝများကိုပြောင်းလဲနေပါတယ် ...
ဒါကြောင့်ပဲလုံးဝငြိမ်ဝပ်သငျသညျထားဒီအဘယ်သူမျှမ-brainer စေ, ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲ့ သံ-ဝတ်, 100% ငွေ Back ကိုအာမခံ:
ငါ၏အလိုလျှင် အဘယ်သူမျှမ-ဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကို သင်ချင်သောကြီးမား, အသက်ရှင်ခြင်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့အသွင်ပြောင်းပေးရမည်နှင့်အထိုက်ပါဘူး ...
ထိုအခါငါရိုးရှင်းစွာတစ်ပေါင်သို့မဟုတ်နှစ်ခုကျဆင်းနေအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ငါသည်သင်၏မိတ်ဆွေများရှိသည်သောပြောင်းလဲမှုမျိုး, Co-လုပ်သားများအကြောင်းပြောနေတာပါပဲနှင့်မိသားစုဝင်များသင်ပြုပုံကိုသင်မေးမြန်းခြင်း ...
ထိုအခါငါ အပြင်းအထန်တောင်းဆို သငျသညျလာမည့်ရက်ပေါင်း 60 ကျော်သည့်အချိန်တွင်မဆိုငါ့အ 24 နာရီဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကအီးမေးလ်ပို့ကြောင်း, သင်၏သိုက်အပြည့်အဝအတွက်ပြန်ရောက်ရှိသည်ဖို့မေးကြည့်ပါ။ သင်, တိုင်းတစ်ပြားမှပြန်ရလိမ့်မယ်, အဘယ်သူမျှမေးခွန်းများကိုမေး၏။
ကိုယ့်ကိုမှတ်မိ - သငျတစျခုလုံးကိုနှစ်လ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအပြည့်အဝရက်ပေါင်း 60 ရှိသည်, ပြန်လာသောခံရရန်သင့်သိုက်အဘို့အမေးရန်။
သင်ဤဝေးကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ကတည်းကအခုဆိုရင်, ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းကိုငါသိ၏။ သငျသညျအရေးယူဖို့အကြောင်းအဆင်သင့်ပါပဲ ...
ဒါကြောင့်ငါ့ကိုသငျသညျအောကျပါအပေးခြင်းအားဖြင့်သဘောတူညီမှုဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်ပါစေ "Fast လှုပ်ရှားမှုဆုကြေးငွေ" ဒီနေ့သင်ငါ၏အဘယ်သူမျှမ-ဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကိုကြိုးစားသောအခါ:
အစာရှောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအပိုဆု # 1 -
အဆိုပါ "Belly Flab အဘယ်သူမျှမပို" သီးသန့်အစီရင်ခံစာ (က $ 47 Value ကို)
ရုံသတိပေးခဲ့သည်ခံရကျနော်တို့ကြောင်းကျောင်းသားများကိုထံမှအစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိပါတယ် ရုံတစျခု သင်တို့သည်ဤမျှလျင်မြန်စွာဗိုက်အဆီဝေးအရည်ပျော်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆုကြေးငွေလမ်းညွှန်ထဲမှာအများအပြားလျှို့ဝှက်ချက်များ၏, စာသားသင့်ရဲ့ခါးကိုချွတ်လဲကြသင်၏ "အဟောင်း" ဘောင်းဘီစေရန်လုံလောက်ပါတယ် ...
Next ကို, သင်တို့ကိုငါပေးမယ့်တာ ...
အစာရှောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအပိုဆု #2-
အဆိုပါ "လက်ငင်းအဲဒါတွေက Metabolic စက်နှိုး" အတွင်းအစီရင်ခံစာ (က $ 97 Value ကို)
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတစ်ဦး "အဆီလည်းမီးလောင် switch ကို" အခုအချိန်မှာလည်းသိခဲ့ပါ - ကြောင်း ပိတ်ထား? သင်သည်သင်၏အလေးချိန်အရှုံးအားထုတ်မှု supercharge နိုင်အောင်ငါ့ကိုဘယ်လိုချက်ချင်းပေါ်ပြန်ပြောင်းသင်ပြကြပါစို့။
သင်သည်သင်၏အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို switch ကိုသက်ဝင်စေဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ်တစ်ခုပင်မြင့်မားအဆင့်အထိအရှိန်မြှင့်မည်သင်ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ဆီအရည်ပျော်ရလဒ်များကိုရပါလိမ့်မယ်။
ထိုအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်တို့သည်လည်းရလိမ့်မယ် ...
အစာရှောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအပိုဆု #3-
အဆိုပါ "ငါးမိနစ်အဆီ Buster စီးရီး" (တစ်ဦးက $ 177 တန်ဖိုး)
ယခုတွင်သင်သည်ပျော်မွေ့တာပေါ့ကြည့်ရှု အံ့သြကိုယ်အလေးချိန်ရလဒ်များကို ရုံအဓိက system ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, ငါပါဝင်ပတ်သက်သုညကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိ၏ဟုဆိုသည်အခါ, ငါကအဓိပ်ပာယျ ...
သငျသညျအသုံးစရိတ်တချို့ရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်စူပါထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာပဲမိနစ်အနည်းငယ်တစ်ရက်စိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်မူကား, သင်သည်သင်၏ရလဒ်များကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပိန်, sexy ကြွက်သားသို့သင့်ရဲ့ flab အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျနိုင်ပါတယ်သောဤအထူးသီးသန့်ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲများ, အတွင်းပိုင်း သာ ငါ၏အထွက်ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့်ရ အဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကို ယနေ့သင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်သည်ကိုလေ့ကျင့်ခန်း busting မြန်ဆန်လွယ်ကူသောငါးမိနစ်အဆီရဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ငါ့ကိုသင်သည်ငါ့ကိုထုတ်ကြိုးစားသောအခါချက်ချင်းလက်ခံရယူမယ့်နေအခမဲ့အပိုဆုကြေးငွေသင်သတိပေးပါစေ အဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကို ယနေ့:
အဆိုပါ " Belly Flab အဘယ်သူမျှမပို " သီးသန့်အစီရင်ခံစာ (က $ 47 Value ကို)
အဆိုပါ " လက်ငင်းအဲဒါတွေက Metabolic စက်နှိုး " အတွင်းအစီရင်ခံစာ (က $ 97 Value ကို)
နှင့် The " ငါးမိနစ်အဆီ Buster " ဗီဒီယိုစီးရီး (က $ 177 Value ကို။ )
ဒါကအပိုတန်ဖိုး $ 321,00 တန်ဖိုးရှိင် သင်သည်ငါ၏ပေးတဲ့အခါသင်ရတဲ့နေ အဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော်စနစ် တစ်ပါလုံးဝအန္တရာယ်-အခမဲ့ဒီနေ့။
ဒီကသင်၏ပေါင်တှရေဲ့အဓိပ်ပာနှင့်၎င်း၏အမာခံမှာပြဿနာတိုက်ခိုက်ခြင်းအသုံးပြုပုံအပြီးအပိုင်သင့်ရဲ့အလေးချိန်-related ဝေဒနာတွေနောက်ကြောင်းပြန်ထွက်ရှိတစ်ခုတည်းသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သတိရပါ။
တဖန်သင်တို့ပြန်လာသောခံရဖို့သင့်ရဲ့သိုက်အဘို့အမေးရန်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ရပ်အတွက်သင်ဆဲအပေါငျးတို့သဆုကြေးငွေနှင့်အတူ, အဘယ်သူမျှမကဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားပါ။ အောက်က "လှည်းရန် Add" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကနံနက်ယံ၌သုံးမယ့်လျှင်အရေးမပါဘူး - သင် button ကို click နှိပ်တစ်ချိန်ကသင်တစ်ဦးအမြန်ပုံစံဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံထွက်ရန်စာမျက်နှာ, ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအသက် 30 စက္ကန့်, ထိပ်ယူပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့! သာ $ 37 - တစ်ဦးကအပြည့်အဝ 100% ငွေ Back ကိုအာမခံနှင့်အတူ!
လတ်တလော ACCESS ကို, 365 ရက်တစ်နှစ်, 24HOURS တစ်ရက်ရယူပါ!
ဒီထွက်ရန်စာမျက်နှာနောက်ဆုံးပေါ် 256-bit encryption ကိုနည်းပညာနဲ့ encrypt ကြောင့်သင့်အတွက်ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံးဝလျို့ဝှက်ထားလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ, အဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမသင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ကြေညာချက်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
တက်ပြလတံ့သောတစ်ခုတည်းသောအရာကျနော်တို့သုံးကြောင်းလုံခြုံငွေပေးချေမှု Processor ကိုဖြစ်သည့် "CLICKBANK," ကနေတာဝန်ခံဖြစ်လိမ့်မည်။ (သူတို့ကနေ့စဉ် 100,000 ကျော်လုံခြုံအရောင်းအကို process ။ )
သင်တို့မူကားရန်လိုအပ်ပါဘူး ယခုပြုမူ။ ငါရိုးသားစွာငါပိုက်ဆံဆုံးရှုံးတာမဖြစ်မှီငါသည်လက်တွေ့ကျကျဒီတော့စျေးပေါထိုသို့ပယ်ရှားပေးခြင်းအားဖြင့်, စျေးနှုန်းကဒီအနိမ့်ထားနိုင်သည်မည်မျှကြာကြာမသိရပါဘူး ...
ဒါကြောင့်ယခုသင်ဖို့အချိန်ရဲ့ က "လှည်းရန် Add" ကိုနှိပ်ပါ အောက်ပါ button ကိုလာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းဖြည့်စွက်ခြင်း, ချက်ချင်းလုံးဝအဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော် System ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်အပေါင်းအခမဲ့အစာရှောင်ခြင်း-action ကိုဆုကြေးငွေများအားလုံးရ။
ရုံကပစ်ခတ်ပေး, ငါကယခု မှစ. ရုံ 60 စက္ကန့်ကိုစတင်, ပိုကောင်းဘို့သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်။
အောက်က "လှည်းရန် Add" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ နှင့်ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်။
သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာညာဘက်ကိုသင်များ၏ရှေ့မှောက်၌, ဒါဟာလာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပုံစံဖြည့်စွက်ဖို့စက္ကန့် 30 ကြာမှသာနှင့် 60 စက္ကန့်အတွင်းသင်ပြီးပြည့်စုံသည့်စနစ်ရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့်ဆုကြေးငွေများအားလုံး။
အခုကသင်သည်အခြေခံအားဖြင့်သုံး options များရရှိပါသည် ...
Option ကို 1 - သင်ဟာဒီစာမျက်နှာကိုပိတ်လိုက်နှင့်သင့်အသက်တာကိုပုံမှန်အတိုင်းအသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းရလဒ်များကိုရတဲ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ပိုများသောစိတ်ပျက်မိကြောင်း, အရှက်, စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်သင်၏ကျန်းမာရေးခေါင်းနှစ်လုံးသည်အဘယ်မှာရှိအကြောင်းကို ...
ထို့နောက် Option ကို2ရှိပါတယ် သင် "တောင်ပံက" ကိုသင်ဤတင်ပြချက်ကနေရရှိခဲ့ဖူးတဲ့အသိပညာကိုသုံးပါနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာဤထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် - ။
သို့သော်မယ့်သူကရင်ဆိုင်ရပါစေ: သင်ဒီစနစ်အတွင်းတွင်ဖွင့်ကြောင်းအတိအကျအဆီအရည်ပျော်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိမဟုတ်လျှင်, "တရားခွင်နှင့်အမှား" ၏အဘယ်သူမျှမငွေပမာဏကိုအပြီးအပိုင်သင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ပြဿနာနောက်ကွယ်ကအစစ်အမှန်အရင်းခံပြဿနာဖြေရှင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်သင်ပင်စမ်းသပ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်သူမျှမကဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော်စနစ်ဟာ guesswork အပေါငျးတို့သဖယ်ရှားပေးသောအခါ, သင့်ပြဿနာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေလို လက် သင်ဖြေရှင်းချက်?
ထို့နောက်သင်ရှိသည် Option ကို3- သင်ကယနေ့အဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော်စနစ်စမ်းနှင့်ဤရက်ရက်ရောရော, ကန့်သတ်-အချိန်နှင့်အပြည့်အဝအမ်းကမ်းလှမ်းမှုကို၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအားဖြင့်တစ်ကြိမ်နဲ့အလုံးစုံတို့အဘို့ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့်ပြည့်စုံသောစနစ်, ပေါင်းပြည့်စုံဆုကြေးငွေအထုပ်တစျခုအနိမ့်အဘို့ရှိသမျှတို့, 100% အမ်းသိုက်ရပါလိမ့်မယ်။
သတိရပါမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဆုကြေးငွေ $ 321,00 တန်ဖိုးနှင့်သိုက်များ၏စျေးနှုန်းထက် ပို. တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြ၏။
ရိုးရှင်းစွာအ မိန့် button ကို click နှိပ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, သင်၏စစ်ဆေးမှုများထွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်။
ကိုသတိရပါ, သင်သင်သည်သင်၏အမ်းသိုက်ကျောအဘို့ကိုတောင်းချင်ဆုံးဖြတ်မီတစ်ခုလုံးကိုရက်ပေါင်း 60 အဘို့ဤစမ်းရ။
တဦးတည်း, သင်သည်သင်၏အလေးချိန်ကိစ္စရပ်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့ထိုသူတို့ဖြေရှင်းမှအခြားသောနေ့ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်းဖို့မတတ်နိုင်လို့မရပါဘူး။ (အဘယျကွောငျ့အဖြေကိုနောက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင်, သင်စောင့်ဆိုင်းရန်လို
ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုကြောင့်နှစ်ယောက် လုံးဝအန္တရာယ်-အခမဲ့, ကရိုးရိုး, ဒီအခွင့်အလမ်းဖွင့်သွားတော်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြရန်အသိစေမှာမဟုတ်ဘူး "ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်။ " သင်သည်ဤ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားနောက်တစ်နေ့အချိန်, စျေးနှုန်းသုံးဆသို့မဟုတ်ပင်အောထွက်လာသည်ခဲ့ကြပေမည် ။
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး, ပျော်ရွှင်မှုနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပြန်ဖြစ်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်က "လှည်းရန် Add" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ နဲ့နောကျစာမကျြနှာပျေါတှငျအမြန်နည်းနည်းပုံစံဖြည့်စွက်။ ဒါဟာအသက် 30 စက္ကန့်, ထိပ်ယူပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Checkout တွင်စာမျက်နှာ 100% လုံခြုံပြီးလုံခြုံသည် ဖြစ်. , သင်၏အသေးစိတျကိုလုံးဝလျို့ဝှက်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်, မေ့လျော့မနေပါနဲ့။
သင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာရီအဆီအရည်ပျော်စနစ်, ပေါင်းဆုကြေးငွေများအားလုံးဖြည့်စွက်ပြီးတာနဲ့, 60 စက္ကန့်အတွင်းသင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာသင်တို့အဘို့အထွက်ချထားပါလိမ့်မည်။
အောက်က "လှည်းရန် Add" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ နဲ့အခုအရေးယူ။
အခုတော့အပြီးအပိုင်သင့်ရဲ့အလေးချိန်ပြဿနာများ reverse နှင့်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည် ...
တဖန်သင်တို့နောက်ဆုံးတော့မထိုက်မတန် sexy တို့နှင့်ကြီးသောခံစားနေသောကျေးဇူးတင်ကျောင်းသားများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာထူး join ဖို့အတှကျ!
ဒါကြောင့်မဆိုထပ်မံနှောင့်နှေးကြပါဘူး။ အောက်က "လှည်းရန် Add" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ နဲ့ရဲ့စတင်ရန်ကြကုန်အံ့။
မူလစာမျက်နှာ | ဆက်သွယ်ပါ | Service ၏စည်းမျဉ်းများ | သီးသန့်လုံခြုံရေး | ပံ့ပိုးမှု | ခွင | Affiliates
အားလုံးပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်© 2016 တွင် - 2017 NonNonsenseTed.com
ClickBank ဒီထုတ်ကုန်များ၏လက်လီအရောင်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ CLICKBANKÂ®, နှိပ်ပါအရောင်းတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Inc ကို, 917 အက်စ် Lusk လမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ဝဲကော်ပိုရေးရှင်း, Suite 200, Boise အိုင်ဒါဟို, 83706, USA နဲ့ခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်အဖြစ် ClickBank ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဒီထုတ်ကုန်၏မြှင့်တင်ရေးအတွက်အသုံးပြုဒီထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကို, ကြေညာချက်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်တစ်ခုထောက်ခံချက်, ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖွဲ့စည်းမထားဘူး
အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာနှင့်ရောင်းမည်ထုတ်ကုန်ရေးသားသူရဲ့အမြင်အပေါ်မှာအခြေခံနှင့်တစ်ခုတည်းကိုသာတစ်ဦးနှင့် "ကဲ့သို့ရရှိနိုင်သော" အခြေခံ "IS AS" ပေါ်တွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတသေနပွုနှင့်ကျန်းမာရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေသည့်အခါအခြားအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကဒီမှာကိုရောင်းကုန်ပစ္စည်းအတွက်တင်ဆက်သည့် protocol များမဆိုအသုံးမပြုခင်သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်အတူဂရုတစိုက်သတင်းအချက်အလက်များပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ် ။ ClickBank မဟုတ်သလိုစာရေးဆရာကိုမဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတစ်ဆင့်ဆေးဘက်သို့မဟုတ်အလားတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အကွံဉာဏျ rendering အတွက်ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်, ထောက်ပံ့သတင်းအချက်အလက်များဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားလိုင်စင်ရကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကကမ်းလှမ်းဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ကိုအစားထိုးရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သငျသညျဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအမြင်များ၏ ClickBank ကထောက်ခံချက်, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်အာမခံသို့မဟုတ်အာမခံချက်မဆိုမဟာဗျူဟာ၏, ထောက်ခံချက်, ကုသမှု, အရေးယူ, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်၏ရေးသားသူဖွငျ့အကွံဉာဏျ၏လျှောက်လွှာအဖြစ်ဒီထုတ်ကုန်၏ ClickBank ရဲ့ရောင်းချမှု construe သင့်ပါဘူး။